Apple waxay qorsheyneysaa inay qalabkeeda ku soo bandhigto heshiisyada Apple One | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxaa laga yaabaa inay tixgelinayso inay kireysato qalabkeeda
Falanqeeye Mareykan ah ayaa daabacay warkan. Akhrinta cinwaanka aad ayaan ula yaabay, laakiin toban ilbidhiqsi kadib waxaan xaqiiqsaday inay fikrad weyn noqonayso. Xaqiiqdii waxay kordhin doontaa iibka aaladaha ugu qaalisan shirkadda, gaar ahaan qaybta ganacsiga.
Shirkado badan ayaa u isticmaala kireynta sidii xal wanaagsan oo lagu maalgeliyo iibsiga gaar ahaan gawaarida shirkadooda. Hadday tahay fuliyaasha, dadka wax iibiya, ama dadka keena, dhammaantood waxay wataan baabuur shirkadeed, iyo sidoo kale shirkad moobil ah, kiniin, ama laptop. Halkan Apple waxay ku leedahay fursad weyn oo ganacsi, haddii ay ballaariso adeegyadeeda Hal Apple in lagu daro qalabka xirmooyinka ay bixiyaan.
Gene Munster iyo David Stokman waa falanqeeyayaal Wolf Ventures oo waxay soo saareen xiiso leh maqaal, halkaas oo ay u maleynayaan in soosaarida Apple One ay tahay bilow iyo in Apple ay bixin doonto isku-darka isku-darka adeegyada iyo qalabka. Waxa ay ugu yeeraan xirmo dhan 360 °.
Kooxda cilmi-baarista waxay sheegaysaa inay faa'iido badan leedahay in bil kasta laga bixiyo lacagta Apple inta badan teknoolojiyada aad u baahan tahay, xirmo isku dhafan oo qalabka, softiweerka iyo adeegyada. Gaar ahaan shirkadaha, loo isticmaali jiray inay la shaqeeyaan heshiisyada kirada.
Labada macmiil ee qalabka iyo wixii xigay Xirmo 360 ° waxay la jaan qaadayaan laba isbeddellada dhaqaatiirta kala duwan: is-beddelka dhijitaalka ah ee joogtada ah iyo isbeddelka dookhyada wax iibsiga ee macaamiisha, ”ayay ku qorayaan maqaalka. "Waxaa intaa dheer, Apple waa shirkadda kaliya ee shaqadan qaban karta, iyadoo loo eegayo adeegyadeeda iyo dayactirka saadka, oo ay weheliso qalab aan kala go 'lahayn iyo is-dhexgalka software-ka."
Maanta, qiyaastii 55% dakhliga shirkadda waxaa laga helaa rukumada. Loup Ventures waxay daabacday in iyadoo lagu darayo rukumo Mac, iPad iyo Watch, tiradaasi waxay u dhowaan doontaa 85%. Kooxda cilmi baaristu ma bixiso saadaal waxa ku kacaya adeegga 360 °. Rakhiis, dabcan, ma soo bixi lahaa ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxaa laga yaabaa inay tixgelinayso inay kireysato qalabkeeda
Fikraddan casaanka ah ee 'MacBook Air' ayaa si fudud u qurux badan
Waze hadda waxay la midoobeysaa Apple CarPlay muuqaal la'aan